Loolanka Fahad_Yaasiin iyo PM Kheyre (Yaa bedelaya Raisul Wasaare Xasan_Cali_Kheyre) – Hornafrik Media Network
Loolanka Fahad_Yaasiin iyo PM Kheyre (Yaa bedelaya Raisul Wasaare Xasan_Cali_Kheyre)
Waxaa cirka isku sii shareeray loolanka dhinaca Awoodda ah ee u dhaxeeya #Raisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yasin.
Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helay ilo xog’ogaal ah oo ka tirsan Siyaasiyiin ayaa ii xaqiijiyay inuu dhacay kulankii 2aad ee Kooxda #Damujadiid iyo Wakiilo Fariin ka waday DFS gaar ahaan Garabka #Fahad iyo Farmaajo.
Kulanka labada dhinac oo ka dhacay Dalka Turkiga ayaa ahaa mid aan toos ahayn. Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Jawaari iyo ku xigeenkiisa Mahad Cawad oo fariimo cad cad ka waday #Fahad_Yaasin ayaa kulan albaabada u xiran yihiin la yeeshay Abdulkariim Xuseen Guuleed oo xubin sare ka ah Kooxda Damu Jadiid oo Taageero badan ku leh Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kulankaan oo daba socday kulan horey u dhexmaray Guuleed iyo Fahad kaasoo lagu lafo guray Awood qaybsi Siyaasadeed, taasoo hada u muuqata in Fahad Aqbalay talo soo jeedintii Guuleed ee ahayd in meesha uu ka baxo Raisul wasaare Kheyre.
Loolanka labada dhinac oo meel xasaasi maraya ayaa lagu soo waramayaa in Fahad Yaasiin doonayo ridista Kheyre in loo maro sifo Sharci ah hadii uu ku adkeysto inuusan is casilin, ayadoo loo marayo Baarlamaanka federaalka Somaliya.
Inkastoo lagu soo waramayo in PM Kheyre uu wado galaan gal siyaasadeed oo aad u culus. Waxaa jira warar aan wali la hubin oo sheegaya Xasan Cali Kheyre inuu dalka Switzerland si qarsoodi ah kula kulmay wasiirka arimaha dibada ee dalka Imaaraadka carabta taasoo uu ku doonayo inuu kaga hortagto #Gulufka Siyaasadeed ee kaga Imaanaya #Fahad Yaasiinka oo dabada ay ka riixeyso Dowladda Qatar.
Xasan Cali Kheyre oo ah nin Afaf badan ku hadla oo leh IQ aad u sareeya islamarkaasina ah Ganacsade Malaayiin doolar heysta ayaa lagu soo waramayaa inuusan si sahal ah isku dhiibi doonin. Sida ay sheegayaan dadka u dhow PM kheyre waxa uu galayaa Dagaal Siyaasadeed kii ugu cuslaa oo la toon ah kuwa ay galeen Raisul wasaarayaashi isaga ka horeeyay ee dalka soo maray Sida #Nuur_Cade iyo Cabdi wali Sh Axmed.
Xeel dheerayaasha Gorfeeya arimaha Siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya inay yartahay rajada ah in Kheyre sii ahaado PM Soomaaliya, sababtoo ah waxaa jira isbaheysyo kala ujeedo ah oo ka wada siman in Kursiga laga tuuro Kheyre, Tusaale ahaan marka baarkamaanka ay timaado xildhibaanada Taageersan #Damu_jadiid, Daljir, Tayo, iyo kutlada ay ku leeyihiin Shariif Sakiin iyo Cabdiwali Gaas, kooxahayaan dhamaan waxay ka siman yihiin in la rido PM Kheyre.
Dhinaca kale, waxaa jira warar aad u soo xoogeysanayo oo sheegaya in Eng #Cabdi_Maxamed_Sabriye uu ka mid yahay Shaqsiyaadka lagu wado inay noqdaan Raisul wasaaraha Soomaaliya ka dib marka kursiga laga tuuro Mr Kheyre.
Eng Sabriye oo ah Aqoon yahan maal qabeen ah ayaa taageero xoogan ka heysta Ganacsatada waa weyn ee Soomaaliya, Odoyaasha dhaqanka ee Beelaha Hawiye, Siyaasiyiin ay ka mid yihiin Madaxweynayaasha maamulada Gobolada #Gaas iyo #Shariif_Sakiin,. Sidoo kale, Eng Sabriye ayaa taageero weyn ka heysta Siyaasiyiinta Mareexaan ee Geed-fadhiga u ah Farmaajo Sida #Goon_jeex iyo Ex PM #Saacid oo markii horaba la doonaya in Sabriye noqdo PM Soomaaliya.
Kooxda Damu Jadiid iyo Axzaabta kale ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inaysan diidmo kala hor imaan doonin hadii Eng Sabriye loo magacaabo PM Soomaaliya. Inkastoo warar hoose ay sheegayaan in Cabdukariim guuleed qudhiisa isku rabo inuu noqdo PM Soomaaliya, taasoo caqabado badan ay ay horyaalaan.
Si kastaba ha ahaatee, Loolanka Siyaasadeed ee u dhaxeeya Fahad iyo Kheyre oo meel xasaasi marayaa ayaa la filayaa inuu soo gabagaboobo ugu dambeyn #Bisha_March 2018 oo la filayo in uu bilowdo kal fadhiga Baarlamaanka.
Madaxwyene #Farmaajo oo sanad ku dhameystay inuu ka gaabsado khilaafaadka hoose ee u dhaxeeyay Kooxdiisa ayaa haatan u muuqda nin doonaya inuu Adeegsado Awoodiisa oo muddo sanad ah si aan wanaagsaneyn ay u adeegsanayeen Shaqsiyaadka ka tirsan tirsan Madaxtooyada iyo Xukuumadda #Nabad_iyo_Nolol.
Marka uu madaxweynaha ka soo laabtay Safarkiisii Nabadda ee dalka ayaa joojiyay Magacaabis ku aadaneyn Taliyaal Ciidan taasoo uu muuqatay in Mowqif-kiisii hore wax weyn iska bedelay, waxaana la hadal hayaa in isbedel badan uu doonayo, taasoo xal iyo horumar siyaasadeed u ah dalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah Xeeldheerayaasha Soomaaliya ayaa rumeysan in #Fahad ka guuleysanayo #Kheyre balse qaar ka mid ah dadka Gorfeeye Siyaasadda Soomaaliya ee aan fadhin ayaa rumeysan inay Jiraan Diidmo cad oo Beesha #Caalamka ay ku diidan yihiin Fahad Yaasiin, Taasoo la leeyahay waxaa Suuro gal in PM Kheyre iyo Agaasime Fahad doonida Siyaasadeed ka wada degaan.